कित्ताकाट गर्न ‘कृषि अयोग्य’ जमिन कहाँ छ सरकार ? - Experience Best News from Nepal
केहि दिनअघि अब वडा कार्यालयको सिफारिसमा कुनै जग्गा कृषियोग्य होईन भने कित्ताकाट गर्न पाईने भन्ने सुनियो । जग्गा जमिनको कारोवार गर्नेहरुले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिए । केहि जग्गाको कारोवार गर्नेहरुले भने कतै रात्रीभोजकै आयोजना पनि गरे भन्दा अनौठो पनि लागेन । तर, अनौठो यो अर्थमा लाग्यो कि, सरकारको विरोधै मात्रै गरिरहने र सरकारको उछितो काटेर बसेकाहरुले पनि सरकारको निर्णय सराहनिय र स्वागतयोग्य भन्दै सामाजिक संजाल रंग्याउँदै सरकारलाई स्यावासी दिन एकाकार भए ।
जग्गा जमिनको कारोवार अलि व्यावसायीक भाषामा भन्नुपर्दा ‘रियल स्टेट’ को काम । केहि रियल स्टेटका काम यसरी भएका छन्, जसले एकिकृत र व्यवस्विथत बसाईका लागि राम्रो उदाहरण पनि दिएका छन् । कम जमिनमा पनि धेरै घरहरु बनाएर एकीकृत काम गरेका छन्, त्यो असाध्यै राम्रो पनि हो । तर, पछिल्लो समय जग्गाको कारोवार गर्ने, बढी रकम तिरको देखेर बैंकिङ कर्जाका लागि अनैतिक काम गर्ने, जग्गा बेचेको रकमको आयश्रोत नदेखाउने, कम्पनी वा उद्योगमा समय दिनुको साटो जग्गा किनबेचमा समय दिने, यसरी कम्पनी नाफामा नभएपछि जग्गाको आम्दानीले कम्पनी चलाउने, कम्पनीहरु घाटामा देखाउने र कर छल्ने, खेति गर्नुको साटो बरु जमिन नै बेचेर ब्याजमा पैसा तिनै जग्गा व्यापारीलाई नै चलाउने दिने जस्ता कामहरु पनि बढ्दै गएका छन् । यसको ठूलो असर राज्यलाई नै पारेको छ ।
जग्गाको कारोवार हुने भनेकै राम्रो, सबै हिसाबले पायक पर्ने, समथर जमिन, चार कुना मिलेको, सबै कामका लागि उपयुक्त हुने नै हो । डाँडा, पाखा, भिर, भिरालो, पहरो किनबेचमा कसको ध्यान जान्छ र ? जग्गाको कारोवार गर्नु आफैंमा नराम्रो होईन । व्यवस्थित बसोबास, जमिनको उचित उपयोग, एकीकृत रुपमा बत्ति, पानी, बाटो लगायतका लागि राज्यलाई पनि सहयोग पुग्छ र सेवाग्राहीका लागि पनि यो उपयुक्त हुन्छ । एकीकृत बसाईले मानिसमा अपनत्वको विकास हुने, सामाजिक भावनको विकाससँगै विभेदको अन्त्यमा पनि यसले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । हामी कहाँ बिडम्बना नै भन्नुपर्छ एकाध बाहेक यसरी काम गर्ने कमै छन् । जग्गाको कारोवारको असामान्य वृद्धिले यसले अन्य व्यवसायलाई नराम्रो असर पार्छ । जग्गा महँगो हुने बित्तिकै कृषि उपजको उत्पादनको साटो किनबेचमा विकास हुन थाल्छ, महँगो मूल्य आउने भएपछि कृषक पनि उत्पादन गर्न तर्फ जाँदैन । कम्पनीहरुको उत्पादन लागत बढ्दा उपभोक्ता मारमा पर्छन् ।
खेतियोग्य जमिन छनौटको मापदण्ड के हो ?
एक दैनिक पत्रिकाले लेखेको छ, ‘अब जमिन बाँझो राखे जरिवाना ?’ । यो सुन्दा पनि हाँसो उठ्दो लाग्छ । कारण के हो भने, जमिन बाँझो किन राख्यो ? जनशक्तिको अभाव हो वा अन्य ? जमिन खेतियोग्य हो वा होईन ?
अब प्रश्न उठ्छ कि खेतियोग्य जमिन हो वा होईन भनेर छुट्याउने कसरी ? त्यसको आधार के हो ? त्यो पनि जानकारी हुनु आवश्यक छ । हाम्रो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रा जग्गाधनीहरु कसैले पनि चाहेर जमिन बाँझो राख्न चाहँदैनन् । जमिन बाँझो हुने कारणहरुमध्ये विकास नपुग्नु, खेति गर्नका लागि सिंचाईको उचित व्यवस्था नहुनु, उत्पादन भएर पनि उपजले उचित मूल्य नपाउनु, काम गर्ने जनशक्तिको कमी हुनु जस्ता कुराहरु प्रमुख हुन् ।
हुन त सरकारसँग कहाँ कति जमिन कृषियोग्य छ ? कति जमिनमा खेति भईरहेको छ ? त्यसको यकिन तथ्यांक हुन पनि सक्ला । र, जग्गाको भु उपयोगका लागि जमिन बर्गिकरणका लागि पनि यो प्रस्ताव आएको हुन सक्छ । जस अन्तर्गत साँस्कृतिक महत्वको, धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्वको, कृषि, आवास, उद्योग, ताल वा तलाउ, जंगल, पुरातत्व, सार्वजनिक महत्व लगायतको वर्गिकरण गरि जमिन उपयोगिताको वर्गिकरणका लागि पनि हुन सक्छ, तर विभिन्न महत्वका जमिन मिच्ने, अधिकरण गर्ने, साँध नै फेर्ने वा सार्ने कामहरु भने नभएका होईनन् । यसको मूल समस्या भने पत्ता लगाउनु जरुरी छ ।
हामी कृषि योग्य जमिनको बहस छाँट्दा खाडी र मरुभूमिमा हाम्रै नेपाली दाजुभाईले तरकारी उत्पादन गरिरहेका छन् । मरुभूमि खेतिका लागि योग्य हुन्छ भने हाम्रो जमिन कहाँ उपयुक्त छैन सरकारले तोक्न सक्नुपर्छ । अर्को कुरा, ईजरायलले माटोविना नै तरकारी फलाएर युरोप निर्यात गर्न थालेको वर्षौं भईसक्यो भने हामी केहि भूमाफियाहरुलाई चलखेल गर्न दिन कित्ताकाटको नाममा कृषि योग्य र अयोग्यको कुरा गरिरहेका छौं ।
कृषि उत्पादन र सरकारको अनुदान
कृषि उत्पादनको कुरा गर्दा कूल भूभागको २१ प्रतिशत जमिन खेतियोग्य रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । हाल खेति गरिएको जमिन ३० लाख ९१ हजार हेक्टर को तथ्यांक छ भने १२ महिना नै सिंचाई नै हुने जमिन १८ प्रतिशत छ । प्राकृतिक विविधताकै कारण हामी कहाँ सबै कृषि तथा खाद्य उपज उत्पादन हुने गरेका छन् । जुम्लाको स्याउ, लालबन्दीको गोलभेडा, ईलामको चिया, धरान धनकुटाको अदुवा अलैंची जस्ता फरक फरक वस्तुको फरक फरक उत्पादन भईरहेको छ । कहाँ के उत्पादन गर्ने हो वा के हुन्छ भन्ने कुरा प्रकृतिले नै हामीलाई छुट्याईदिएको छ, यसकारण कृषि योग्य जमिनको बहस गर्नु उचित हुन्न । हामी कहाँ उत्पादनमा समस्या त्यति धेरै होईन, जति हाम्रो बजारीकरणमा छ । नेपाली गोलभेडाले बजार नपाउँदा नपाउँदै भारतबाट गोलभेडा ल्याएर चितवनमा बेच्नु कुन नैतिकता हो ? कृषकसँगको सम्झौता तोड्दै मनोमानी गर्ने व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन ? किसानलाई उचित मूल्य दिन छाडेर भारतीय उपज निर्वाध भित्र्याउनुको तुक के हो ? कृषि उत्पादन भएन भनेर कसैले भन्छ भने त्यो सरासर गलत हो । उत्पादनको सही व्यवस्थापन गर्नु पहिलो कुरा हो । उत्पादित उपजले बजार पाउने ग्यारेन्टी हुने हो भने उत्पादन आफैं बढ्दै जान्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ र २०७४/०७५ का लागि पशु सेवा विभागले १४ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको तथ्यांक छ । तर यसरी आउने रकम साना किसानले पाउँदै पाउँदैनन् । दुध उत्पादक किसानले पाउनु पर्ने रकम ठूला व्यवसायीले पाउँछन् भने पाउनु पर्नेले नपाएपछि उत्पादन भएन भन्नु पनि मुर्खता हो । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा कृषि विकास मन्त्रालयले गरेको अनुदान लगानी १० अर्ब ७८ करोड छ भने १ खर्ब ३४ अर्ब ३२ करोड लगानी कृषि विकास बैंकले २०७५ असारसम्म लगानी गरेको छ । यसरी गरिएको अनुदान लगानीमा ‘ठूला’ को हात पर्छ भने साना किसान (जो वास्तविक किसान हो) को हातमा पर्नै मुश्किल छ ।
नेपालमा भएका सबै खाले जमिनहरुको आफ्नै विशेषता छ । कित्ताकाट वा किनबेचको नाम दिएर गरिने जग्गाको बर्गिकरणले जग्गाको व्यावसायीक विकासलाई फाईदा गर्ने हो वा कृषकको हीतमा हुने हो, त्यसको स्पष्ट निक्र्यौल गर्नु जरुरी छ । जग्गाको बर्गिकरण र समुचित उपयोग गर्न सकेमात्रै पनि हामीले जमिनको सही सदुपयोग गरि उचित लाभ लिन सक्छौं, अन्यथा जग्गा कित्ताकाट गर्ने मेसोका लागि मात्रै यो नीति दुःखदायी हुन सक्छ ।
(सिग्देल कृषि उद्यमी तथा कृषि अभियन्ता हुन् )